Home News Wararkii ugu dambeeyay Weerar ka dhacay gobolka Sh/hoose
Wararkii ugu dambeeyay Weerar ka dhacay gobolka Sh/hoose
Al-Shabaab ayaa sheegtay dagaal culus oo ka dhacay duleedka degaanka Jasiira in ay ku qabsadeen gaari nooca gaashaaman ka dib markii Wadada u galeen Ciidamo ka tirsan AMISOM iyo xoogga dalka Soomaaliyeed.
Al-Shabaab ayaa sheegtay in dagaalkaasi ay ku dileen Lix Askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Dhanka kale Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga ciidamada AMISOM ee duleedka degmada Qoryooleey Sh/Hoose.
Dagaalyahano hubeysan oo katirsan Al Shabaab ayaa la sheegay in ay weerareen saldhigga melleteriga Uganda waxaana halkaas ka dhacay iska hor’imaad in mudda ah socday.
Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay taliska Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku aadan sheegashadda Al-Shabaab ee weeraradaan la sheegay in ay ka dhaceen gobolka Shabeellaha Hoose.
Previous articleMadaxweynaha Galmudug oo gaaray Magaalada Gaalkacyo
Next articleHowlgalo ka Socda Af-gooye
Guddiga dib u eegista dastuurka ee Baarlamaanka oo ka horyimid Shirka...
Xildhibaan Abuukaate”Mooshinka Gudomiye Jawaari Waxa Abaabulaya RW Kheyre oo Lacag Badan...